အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း နှင့် ရလာဒ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း နှင့် ရလာဒ်။
အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း နှင့် ရလာဒ်။
Posted by ခင်ခ on Oct 16, 2012 in Relationships & Family, Society & Lifestyle | 26 comments
မိန်းမတွေက မွေးရာပါ ပျစ်တောက်ပျစ်တောက်တွေ ဖြစ်တယ်။ ပစိပစပ်များတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်မှာ၊ တစ်ချို့အခြေအနေမှာ နှုတ်ပိတ်နေတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ “silence is golden” ဆိုသလို တစ်ခါ တလေမှာ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းက သင့်ကို အကောင်းတွေ သယ်လာပေးနိုင်ပါတယ်။ မကြာမှီ သတင်းကျွတ်လို့ ၀ါကျွတ်ပြီမို့ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ ရည်ရွယ်သူများနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဇနီးမောင်နှံများအတွက် ရှာဖွေ စုဆောင်း ထားတာလေးတွေ ထဲက ကောက်နုတ်ခါရေးပေးမယ်ဗျာ။
(၁) သူ မီးဖိုချောင် ဝင်တဲ့အခါ
အမျိုးသမီးတွေသည် မီးဖိုချောင်က ကိုယ့်နယ်ပယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး မီးဖိုချောင်ဝင်သူတိုင်းကို ကိုယ်အမိန့်ပေးလို့ ရတယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ သူစိတ်ပါလို့ မီးဖိုချောင်ဝင်တဲ့နေ့မှာ လိမ္မာပါးနပ်တဲ့သင်က ဟင်းရွက်ဆေးကူ၊အိုးခွက် ပန်းကန်ပေးရုံကလွဲရင် တစ်နေရာကို ရှောင်နေလိုက်ပါ။ စားဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်ချိန်မှ သင်ပါးစပ်ကိုဖွင့်ပါ။ သူချက်တဲ့ဟင်းက ဘယ်လောက်စားကောင်းကြောင်း၊ ဟင်းချက်အစီအစဉ်မှာ ဝင်ပြိုင်သင့်ကြောင်း ချီးကျူး စကားပြောပါ။ မီးဖိုချောင်ကို အချက်အပြုတ် သင်တန်းကျောင်းလို သူဓားကိုင်နည်းက မမှန်ဘူး၊ ဒယ်အိုးကိုင် နည်းက ပုံမကျဘူး၊ အရသာ ပေါ့သလေ၊ ငန်သလေနဲ့ ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင် ပြီး ဆရာသွားမလုပ်ပါနဲ့။ သူစိတ်ထိ ခိုက်ပြီး မီးဖိုချောင် လုံးဝမဝင်တော့တဲ့အခါ သင်သာလျှင် နေ့တိုင်း မီးဖိုချောင်စောင့် နတ် ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
(၂) သန့်ရှင်းရေး ဝိုင်းကူလုပ်တဲ့အခါ
ဂျပန်နိုင်ငံက ပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ အခုခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံက နောက်မီးလင်းလို့ မဟုတ်သလို ရိုက်နှက်ရန်ဖြစ်ကြလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ “အိမ်အလုပ်ကို သူကူမလုပ်ဘူး” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။ မိန်းကလေးတွေကလည်း စဉ်းစားကြည့် သင့်တယ်။ ကိုယ့်အမျိုးသားက ကိုယ့်ကြောင့် အကျင့်ပျက်သွားတာလား? သူကိုယ့်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကူတဲ့အခါ ကိုယ်က ဘေးက နေ ဟိုလိုလုပ်ပါလား၊! ဒီလိုမဟုတ်ဘူး! နှေးလိုက်တာလို့ ပျစ်တောက်တောက် ရေရွတ်နေခဲ့သလား? တစ်လော က သူငယ်ချင်း အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့အိမ်က ရေချိုးခန်းကို သန့်ရှင်းဖို့ သူ့အမျိုးသား က အထူးစီမံထားတဲ့ ရေမြုပ်တွေသွားဝယ်ခဲ့သတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီရေမြုပ်ဟာ ဘယ်လောက် ကောင်းကြောင်း ၊ ချေးကပ်နေတဲ့ ဘေဇင်နဲ့ ရေစက်ခေါင်းတွေကို ပြောင်လက်အောင် ဆေးနိုင်ကြောင်း ပြောတယ်။ သူငယ်ချင်းက ဘာမှမပြောဘဲ ဧည့်ခန်းမှာ ကြောင်ကလေးနဲ့ သွားဆော့နေခဲ့ပြီး သူ့အမျိုးသား ဆေးကြောနေတာကို စိတ်ဝင် တစား မကြာခဏ သွားရပ်ကြည့်ရုံကလွဲလို့ စကားတစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့ဘူးတဲ့။ ပြောင်လက် အောင်ဆေးကြောပြီး နောက် သူ့အမျိုးသား က … “တွေ့တယ်မဟုတ်လား? ဒီရေမြုပ်နဲ့ဆေးရတာ လွယ်လည်းလွယ်တယ်၊ ပြောင်လည်းပြောင်တယ်” လို့ ပြောတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ “သူသာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာနဲ့သုံးသုံး ကောင်းတယ်” လို့ တွေးဖြစ်ပေမယ့် ပါးစပ်က “ဟယ်… တကယ်ပဲတော့…. ရေချိုးခန်း က တစ်ခါမှ ဒီလောက်ထိမတောက် ပြောင်ဖူးဘူး.. သူအရမ်းတော်တာပဲ” သူ့စကားကို သူ့အမျိုးသား က တဟားဟားနဲ့ သဘောကျပြီး”ညစ်ပတ် သွားရင် နောက် တစ်ပတ်လည်း သူ ‘ ပြန်ဆေးပေးရမယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကဲ… ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးကို လိမ္မာပါး နပ်တယ်လို့ မခေါ်ဘူးလား!
အပြင်ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် သူဒေါသထွက်တဲ့အချိန် အဲဒီကိစ္စမှာ သူမှားခဲ့လည်း သူ့ကိုစကားခွန်းကြီးခွန်းငယ်ဖွဲ့ပြီး အပြစ်သွားမတင်သင့်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ သွင်ပြင်ကို ရုပ်ပျက်စေနိုင်သလို သူ့ဒေါသကို ဆွပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ သူ့ကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင် ရင် မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ ကြည့်ပါ။ အဲဒီနောက် မျက်ရည်တွေ မျက်လုံးအိမ်ကနေ တဖြေးဖြေး စီးကျလာပါစေ။ သူ့ဒေါသသံတွေ တဖြေးဖြေးတိုးလာပြီး နေမသိ၊ ထိုင်မသာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို အာမခံပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူမှားသွားကြောင်း ကိုယ့်ကို ပွေ့ဖက်တောင်းပန်လာလိမ့်မယ်။ မငိုနဲ့… မငိုပါနဲ့တော့လို့ သူချော့လာပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်၊ သူဌေး ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အနှိမ်ကျင့်တာကိုခံရချိန် အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး ကိုယ့်ကို သူရင်ဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ သူက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာတဲ့ကလေး တစ်ယောက်လို ကိုယ့်ဆီက နှစ်သိမ့်အားပေးစကားကို မျှော်လင့်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သူ့ကိုပွေ့ဖက်ပေးလိုက်ပါ၊ ခေါင်းကို ပွတ်သပ်ပေးပါ၊ပြဿနာဖြစ်သူတွေကို သွားဂရုစိုက်မနေဖို့ နှစ်သိမ့်ပါ။ သူခံနိုင်ရည်မရှိကြောင်း၊ စိတ်ဓာတ်တွေ မကြံ့ခိုင်ကြောင်း သင်ခန်းစာ သွားမပေးပါနဲ့။ သွားမလှောင်ပါနဲ့။ ထိခိုက်ခံစားနေတဲ့ သူ့စိတ်အပေါ် အေးစက်တဲ့စကားတွေ ထပ်လောင်းမိရင် နှစ်ဦးကြား အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်မှာ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းခဲ့လို့ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ထမင်းစား၊ ရေချိုးပြီး သူ အိပ်ရာဝင်ချင်နေတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူနဲ့စကားပြောချင်နေတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အိပ်ချင်ပြီး မအိပ်ရသူရဲ့ စိတ်ကဒေါသ ထွက်လွယ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဘေးမှာနေပြီး ထပ်ပြောနေဦးမယ် ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ နှစ်ဦး စလုံး ဒေါသစိတ်နဲ့ အိပ်ရာဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ အိပ်ချင်သူကို အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါစေ။ နောက်တစ်နေ့မနက် မနက်စာ စားချိန်၊ သတင်းစာ ကြည့်ချိန်မှာ ကိုယ်ပြော ချင်တဲ့စကားကို ပြောရင်လည်း နောက်မကျပါဘူး။ ဒါဟာလည်း နားလည်ပေးတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ထုတ်ဖော်နေသလိုပါပဲလေ။
ပစိပစပ်များတတ်တာ မိန်းခလေးသဘာဝ အကျင့်ပါဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေ အဲဒီလိုများ နှုတ်ဆိတ်နေပေး ဖြစ်ရင်တော့ အေးဆေးပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ထောင်လေး တစ်ခုများဖြစ်လေမလားလို့ တွေးမိရင်း ရေးမိခြင်းပါ။
နှုတ်ဆိတ်မနေခြင်းရဲ့ ရလာဒ်လေးလဲ ရေးပေးပါဦးဗျ
ကျနော်ကတော့ နားငြီးရင် ဘီအီး ရေခဲစိမ်အေးအေးလေးချပြီး….အင်း..အဲတာပါပဲ
သူ ဘီအီးသောက်ပြီး မူးယစ် ရမ်းကားတဲ့အခါ
တုတ်ကြီးကြီးနဲ့ ခေါင်းကို တအားလွှဲရိုက်ပြီး
အိမ်ရှေ့မှာသာ ပစ်ထားလိုက်ပါ ..
သူ လိမ္မာ လာပါလိမ့်မည် …..။
ကိုစိန်ဗိုက်ဗိုက်ရေ ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ နုတ်ဆိတ်မနေခြင်းရဲ့ ရလာဒ်တော့ လေ့လာကောက်နုတ်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ။
ညီမကတော့ (၁) အချက်ကို သူလုပ်ရင် အမြဲချီးကျူးတယ် … ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယူချက်တဲ့ဟင်းလက်ရာကို ဘယ်သူမှ မမှီဘူး … ယူချက်တဲ့လက်ရာကို အိုင်အကြိုက်ဆုံးပဲလို့လေ …တကယ်လည်းကောင်းပါတယ် ….သူ့လက်ရာက ….
(၂) အချက် သူ့တာဝန်လေ … ယူရှင်းထားတဲ့ အိမ်လေးကို အိုင်က ကြည့်ရတာ အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာတာပဲ လို့ပြောတော့ သူနေမကောင်းတာတောင် အိမ်ကိုအလှဆင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တတ်တယ်လေ ..
(၃) အချက် အဲဒါ မာယာပေ့ါနော် … ခစ်ခစ်
(၄) ဒါမျိုးကတော့ ပိုင်ပြီးသား ဘေးနားမှာ ဖယောင်တိုင်လိုနေပေးတဲ့သူပါ ….
(၅) အဲဒါက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် လေးခရေ ….
ကျွန်တော်က နားပူရင်စိတ်တိုတယ်… နားမပူရင် အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်…
“အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတတ်တယ် …”
ဟဲ့ … ထောက်လှန်းရေးမ မိအံစာ …. အကုန်လိုက်ထောက်နေပါလားအေ ……..
ဟီးဟီး ….မာမီခိုင်က … အံချာမ ထောက်တာ သိသတဲ့တော် …. အရပ်ကတို့ရေ …..ကျုပ် ယောက္ခမဂျီး ခေတ်မှီပါဒယ်တော့ …
မိုက်ဒလယ်ကွ ……. မဒမ်ခင်ခတို့များ .. ကံကောင်းလိုက်လေချင်း … ဟီး :harr:
အန်ကယ်ရေ… မိန်းမတွေကို ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် စကားများတယ်သာ ပြောကြတာ ..ယောကျာ်းတွေ ပွစိပွစိပြောလျှင် … မိန်းမပွားတာထက် ပိုဆိုးသေး ….။ အဲ့လို ယောကျာ်းမျိုးဆို .. အတော် အာရုံနောက်စရာကောင်းမှာပဲ ……. ။
ဒါနဲ့ .. အန်ကယ်ဟိုနေ့က .. စက္ကူတိပ်တစ်ဒါဇင်ဝယ်သွားတာ ..ဘယ်နေရာမှာ သုံးမလဲလို့ ခုမှ သိတော့တယ် .. ခွိခွိ ။
စက္ကူတိပ်ဝယ်တုန်းက မအိတုံကိုတွေ့လို့ နုတ်ဆက်လိုက်မိတာကိုးက မှားသွားတာ ခုမှဘဲ သိတော့တယ်။ နောက်ဆိုရင်တော့ လှမ်းတွေ့တာနဲ့ ပြေးတော့မယ်ဗျာ။
ဂယ်လို့များ ဒီသာလိကာတူမက အပျိုဂျီးဖြစ်ချင်နေတဲ့ကြားက ဖူးစာကံအကြောင်းပါခဲ့ရင်လို့ စဉ်းစားပီး မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်…
လုံမလေး သာလိကာတူမရေ ဖူးစာကံအကြောင်းပါမယ်ဆိုရင်လည်း ဖိတ်စာလေးတော့ပို့
ကာလီဒါခ ကျမ်း လို့ တောင် အမည်တပ်ချင်လာပြီဗျာ
ကာလီဒါသ ကတော့ ဥပယ်သမျဉ်နဲ့ ခံရတယ်ဆိုတော့ဖြင့်–။
အနေလို့ ပြန်မပြော နားမထောင်ဆိုပြီး စိတ်မရှည်လို့ အတီးခံနေရမှာကိုလည်း ကိုသစ်တည်ရေ သတိထားအုံးနော်။
နှုတ်ချိုသျှိုတစ်ပါးဆိုစကားအရ တီတီတာတာ လေးတွေ လိုပြန်ပါတယ်။
အကျယ်ကျယ်၊ မငြိမ်းဖွယ်၊ မာန်စွယ်ချုံး၍ ကျဉ်းတတ်စေ ဆိုပေမဲ့၊
ပြောရေးရှိက ပြောတတ်ရ၏ လို့ စာဆိုအလာရှိပြန်ပါတယ်။
တီချယ်ကြီးရေ အသွား အပြန်၊ အကောင်း အဆိုး၊ အဖြူ အမဲ၊ ဖောင်းခြင်း ပိန်ခြင်း၊
မွေးခြင်း သေခြင်း၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး စသည်ဖြင့် ဆန်ကျင်ဘက်တွေ တွဲနေခြင်းကလည်း တစ်ခုတည်း ရပ်တည်ခြင်း မဟုတ်တဲ့သဘောပါဘဲနော်။
ဒါဆိုရင် ဇနီးမောင်နှံတွေကလည်း တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့် ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း တည်ရှိမှု့မှာတော့ ၀မ်းသာခြင်းသာ ဖြစ်စေချင်ခဲ့သူပါလို့–။
50% လောက် နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်ရင် အဟုတ်နိပ်တာ….
လျင်၏ ခွင်မိချင်ရင် ပေါတောတောနဲ့ ဟာသလေးနှောပြောလိုက်…
ကိုယ့်ကိစ္စတွေ ပြီးမြောက်ချင်ရင် အဲ့လိုလေးသာနေလိုက်ဗျ…
မြန်မကြာ မန်းနီးလည်း လာတတ်သေးတာ…
သူများတော့ ပြောဘူး..ဖေဖေနဲ့ဆို ပြောပါတယ်…
သရီးခေလည်း အားကျရင် အဲ့နည်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်နော…
အဲ့လိုလုပ်တဲ့အကျိုး ဥပမာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဝေမျှရရင်….
မနေ့ညကဆို ဖေဖေက သီတင်းကျွတ် ဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ မပြန်ခင် မောင်နှမတွေ
စုကန်တော့ကြတော့ မုန့်ဖိုး တစ်ယောက်၃သောင်းစီရတယ်..ခါတိုင်းက မရတာကစလို့
၁သောင်း၊၂သောင်း မနှစ်ကထိ မိုင်ကုန်ပဲ…မုန့်ဖိုးလည်း ရမယ်လုံးဝမထင်ထားပါဘူး..
ဘာလို့ဆိုတော့ နောက်လလာတုန်းက ပြန်ကာနီး ကန်တော့ကြတော့ ၃သောင်းစီ
လည်း ၀မ်းသာအားရ စပ်ဖြဲ၊ရယ်ကျဲနဲ့..ဟိဟိ..ရင်းထားတာကမှ 11650(ဦးဂျမ်းပုဆိုး)
ပြန်ရတော့ ၂သောင်း… မြတ်တောင်နေသေးတယ်..ကိုလတ်တော့ အရင်းကျေပြီ…
ကိုကြီးကရောဆိုတော့…ကိုကြီးက ဒါပဲ လိုက်တွက်နေတယ်…အံမယ်….တွက်တာ
မှုတ်ပါဘူး…သူများကိုပြောဖို့ပဲ…ဆိုတော့ ဖေဖေက ကဲကဲ..ဒါဆို..၁သောင်းတိုးလိုက်…
၃သောင်းစီယူလိုက်…သမီးဖေဖေ့ကို စာရင်းရှင်းစရာရှိတဲ့အထဲက နှုတ်လိုက်တဲ့….
သများပြောပြီး ပြီးကျတော့ ၃သောင်းက ကြာလိုက်တာ…ဘဏ်ကနေ လွှဲပို့တာတောင်
“အိမ်မှု့ကိစ္စ နိုင်သမျှ မိဘကူညီပါ”…ဒီလိုရှိတယ်..
“အိမ်မှု့ကိစ္စ နိုင်သမျှ မိန်းမကူညီပါ”
ပစိပစပ်များလွန်းတဲ့မိန်းမကို နှုတ်ပိတ်စေသောနည်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကြင်နာမှူပါပဲ……..
သူတို့စကားများတာက သူတို့ ယောကျာင်္းတွေရဲ့ အရေးတယူပြုမှူ ဂရုစိုက်မှူကို ခံချင်လို့ ပါ………..
ကိုယ့်မှာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ရုံးမှာ ရှုပ်လာလို့ ………..
သူလည်း အိမ်မှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့စိတ်မညစ်ရဖူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ …………….
သိပ်အဆင်ပြေပီး အိမ်ဖော်များများနဲ့ နေရတဲ့ ကြေးရတက်မမ များတော့ မပါဖူးပေါ့နော်………..
အလယ်အလတ်တန်းစား အခြေခံလူတန်းစား မိန်းမတွေမှာတော့ တနေ့ တနေ့ယောကျာင်္းပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို လောက်ငအောင် ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွတ် ရတာ သူတို့ မှာလည်း တဒုတ်ခပါ………..
မဟုတ်ပဲ အိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင် အိမ်အလုပ်ပဲလုပ်နေရတဲ့ မိန်းမဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူ အားငယ်စိတ်ဝင်လာပါတယ်……
အားငယ်စိတ်ဝင်တဲ့မိန်းမတွေ အကြောက်ဆုံးကိတ်စကတော့ သူတို့ ယောကျာင်္းက မေ့သွားမှာပါပဲ…..
အသုံးအဖြုန်းကြီးမယ် နောက်မီးလင်းမယ် ဒါတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် အလုပ်ပိနေလို့မပူဖြစ်တဲအပူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ….
သူတို့ မှာတော့ အလုပ်မရှိ အိမ်အလုပ်လုပ် အားတဲ့နဲ့အဲ့အတွေးတွေက ၀င်လာပါပီ…….
အလုပ်ရှိပီးအိမ်အလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းမ တွေကျတော့လည်း သူတို့ အပူကတမျိုးပါ……………….
ကြင်နာမှူလေးပိုထားပေးလိုက်ပါလို့ ……. သူတို့ ဘက်ကလည်းအထိုက်အလျောက်တော့ နားလည်ပေးပါလိမ့်မယ်……
သိပ်စကားများလွန်းရင်လဲစိတ်လေတယ်( စိတ်ပင်ပန်း နားပူလို့)
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြောနေတဲ့အချိန်က တော့ စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းလေးလိုပါဘဲ
(ကြင်နာသူကိုယ့်အပါးရှိနေခိုက်ဟာ ဘ၀ရဲ့ အသာယာဆုံးအခါ)
အင်း အမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တာ့ ညာခိုင်းတာပေါ့နော်
ချိုချိုသာသာလေးနဲ့ ညာခိုင်းတော့ ကိုယ်လည်း သက်သာ သူလည်း ကျေနပ် …
ကြိုက်သွားပြီ ကိုခင်ခရေ … မှတ်ထားလိုက်ပါအုံးမယ်
အခွင့်ကြုံလာတဲ့ခါ ထုတ်သုံးဖို့ပေါ့ …. ဟီးးး
တဟားဟား နဲ့ ဘဲ အော်ရီသင့်သလား၊
မချိပြုံးလေး ဘဲ ပြုံးနေရမလား။ စဉ်းစားရကြပ်သွားတယ် ကိုခင်ခရေ့။
ကျွန်မ အနီးကလူ ရဲ့ မာတာမိခင်ကြီး က ဟင်းချက် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား။
သူ လူပျိုဘဝ အလုပ်မှာ ထမင်းဘူး ထည့်လာရင် အမြဲ လှလှပပ အရသာရှိရှိ ဟင်းလေးတွေနဲ့။
သူက သူ့အိမ်မှာ ထမင်း၊ ဟင်းကျန် ဘယ်တော့မှမစားပါတဲ့။
ကျွန်မ ကိုလဲ စာဖိုမှူး တင်လိုက်ရော ခမျာ ဖြစ်သလို တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အလွယ်ချက်၊ အမြန်ချက် ဆီမသတ် ရေလုံပြုတ် ဟင်းတွေ ရယ်။ ဟင်းကျန် တွေရယ် စားရပါတယ်။
(အမှန် အဲဒါတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီပါ့)
ဒီတော့ ကျွန်မ ဟင်းချက်ချိန် အနားလာပြီး ဟိုဟာ ဒီလို လုပ်၊ ဒီဟာ ဟိုလို လုပ် နဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေ လာပါလေရော။
ကျွန်မ က ပြောပါတယ်။
မီးဖိုထဲမှာ ၂ယောက် waste ဖြစ်တာမို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာချက်လို့။
သူကလဲ ခေသူမဟုတ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဝင်ချက်ပါတော့တယ်။
သို့ပင်သို့ငြား ၂ပါတ်လောက်ဘဲ ဝင်ပြီး နောက်တော့ မင်းသဘောရှိ ဘဲ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
နောက်ပိုင်း ဘာကို ဘယ်လို ချက်ချက် ပါးစပ်ပိတ်နေရော။
ကွန်မန့်ရေးလို့ ပြောကြသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ အခုရေးတာထက် ပိုကောင်းတဲ့နည်းလေးတွေလည်း မရေးဖြစ်ကြပေမယ့် ရှိဖြစ်နေကြမှာပါ၊ အခွင့်အခါကြုံရင်တော့ share ကြပါအုံးနော်။
ကွန်မန့်တွေမှာ နှုတ်ခမ်းနီ kiss ပေးကြသူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူး kiss နော်။
တစ်ချိန်မှာ အသုံးချဖို့အတွက် ကူးယူမှတ်သား ထားပါကြောင်း